Laptop Keyboard က ")" key ကို ရိုက်မရလို့။ — MYSTERY ZILLION
Laptop Keyboard က ")" key ကို ရိုက်မရလို့။
October 2010 edited November 2010 in Hardware
Acer Laptop Keyboard က ")" key ကို ရိုက်မရလို့။
သုည (0) ကိုတော့ ရိုက်လို့ရတယ်။
ကွင်းပိတ် ")" ကျတော့ ခါတိုင်းလိုပဲ Shift နဲ့ ရိုက်တာပဲ။ အခုမရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။
သုည (0) ကတော့ ရနေဆဲပဲ။
ဘယ်လို ပြန်ပြင်လို့ ရမယ်ဆိုတာ အစ်ကို အစ်မများ လမ်းညွှန်ပေးကြပါဦး ခင်ဗျား။
keyboard layout ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ။ control panel ထဲကပြောင်းရတာထင်တယ်။ ကျွန်တော်တုံးကတော့ @ ကိုရိုက်မရတာပါ။
ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာကတော့ ကီးတောတော်များများ(x c, e, r, တွေရိုက်လို့မရတာပါ။
လတ်တလောဆိုရင်တော့ on screen keyboard သုံးလို့ရပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် usb keyboard ဆိုရင်လဲ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုက တော်တော်ကို ထုံပါတယ်ဗျာ။ :rolleyes:
ဒါမှမဟုတ်ရင် OS ကို reinstall လုပ်ရင်များရနိုင်မလားခင်ဗျ။
Uninstall လုပ်ပြီး Install ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။ Key ငြိနေတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Driver Update ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြည့်ပါအုံး ...
ကျွန်တော့် Laptop ကတော့ Toshiba M50 ဗျ... ကီးဘုတ်ကနေ Y, H, N , O , L , . ဆိုတဲ့ကီးတွေ အစဉ်လိုက်နှိပ်လို့မရဘူး ... ၀င်းဒိုးတက်လာရင်လည်း .(post-top)ကီးက ညိနေလားမသိဘူး တီ .. တီ ... တီ .. တီ.. ဆိုပီးတော့ သံရှည်ဆွဲပီးတော့ကို အော်နေတော့တာပဲ တအောင်လောက်ကြာရင်တော့ ၀င်းဒိုးတက်သွားတယ်.... ဒါပေမယ့် အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ကီးတွေကတော့ လုံး၀နှိပ်လို့ကိုမရဘူး ... ဆိုင်သွားပြတော့
ကီးဘုတ်အချပ်လိုက်လဲရမယ် ... ၄ သောင်းလောက်ကျမယ်လို့ပြောတာနဲ့ လောလောဆယ် တပ်ပြန်ခေါက်ခဲ့ရတယ်... ပြင်လည်း ဘာမှမထူးဘူးလို့ပြောတာကိုး .... ခုတော့ စက်လေးကို ဂျောင်ထိုးထားရတယ်ဗျာ.... အဟင့်.. အဟင့်
researcher wrote: »
်Fn ကီးလေး နဲ့ Num ကီးလေးကို နှိပ်နှိပ်ပြီးသုံးတာ ကော
EVER SMILE NEVER DIE
caspertyzin wrote: »
Toshiba တွေကတော့ ကျနော်တော်တော်စိတ်ကုန်သွားတာပါဗျာ။
ကျနော့်ရုံးက Toshiba L310 လေးတစ်ခုမှာလဲ "M" Key နှိပ်လို့ မရဘူး။
တခြားစက်တွေမှာလဲ ... Screen, Keypad, Board, bar ... nyar .... မျိုးစုံနေတာပဲ။
တခြား Toshiba Model တွေကို မသိပေမဲ့ .... Toshiba L310 ဆိုရင်တော့ .... ဆယ်ခါပြန် ဆလံပါပဲဗျာ .....
အခု Toshiba Center ( Luckey Bird @ သိမ်ဖြူလမ်း (သိမ်ဖြူမှတ်တိုင်) ) မှာ Warranty Extension လုပ်လို့ရတယ်။
၂နှစ် အတွက် Local Warranty ဆိုရင် - 109$, ၂နှစ်အတွက် International Warranty ဆိုရင် 195$ ကျပါတယ်။
ကျနော်မြင်တာကတော့ ... Warranty ကုန်ခါနီးရင် Local Warranty လောက်တော့ သွားပြီး တိုးသင့်တယ်ထင်တာပဲ။ ကျနော့် ရုံးကစက်တွေကိုလဲ Warranty တိုးထားတယ်။
Toshiba က တစ်နှစ်ခွဲလောက်သုံးပြီးရင် ... ပြဿနာမျိုးစုံစလာတော့တာပဲ။
( ၀ယ်တဲ့ အချိန်မှာ warranty 1 year ပေးတာလေ။ အံကိုက်ပဲနော် ... )